निर्वाचन आयोगलाई सोध्नैपर्ने पाँच प्रश्नहरु | Hamro Patro
नेपाली समय: 10:06:04
५० लाख भन्दा धेरै नेपालीहरु विदेशमा रहेको कोरा तथ्यांक छ, अनि तिनीहरुको मतलाई छुटाएर गरिएको यो मतदान कत्तिको सान्दर्भिक छ ? प्रविधीको यूगमा बाल्कोटका कुरा बाल्टीमोरकाले बसन्तपूर भन्दा छिटो थाहापाउछन् भनेँ एउटा क्लीकमा बैदेशिक रोजगारमा गएको नेपालीले भोट हाल्न नपाउने ? के यो असंभव छ, निर्वाचन आयोग ?
२० वर्षपछि नेपाली गाउँहरुमा मतपत्र अनि मतपेटिका पुगेका छन् अनि बाँकी ठाँउहरुमा यही जेष्ठ ३१ मा दोश्रो चरणमा पुग्दैछन् । मतदान सहज कुरा त हैन तर निर्वाचन आयोग जस्तो मतदानकैलागि गठित आयोगको भने मतदानका विषयमा स्पष्ट अनि उत्तम विकल्प अाउन जरुरी छ । एउटा स्वतन्त्र मतदाता, विष्लेषक अनि जागरुक नागरीकका हिसाबले निर्वाचन आयोगलाई यस मतदानको प्रथम चरणको ब्यबस्थापकिय केही प्रश्न प्रस्तुत गर्न चाहयौं । प्रस्तुत छ, स्थानिय निर्वाचन २०७४ - बैशाख ३१ बाट निर्वाचन आयोगले सिक्नैपर्ने ५ वटा कुराहरु ।
१) साँच्चै भित्तामा पोष्टर टाँस्दैमा मतदाता शिक्षा पुग्छ र ?
एकफेर आत्ममूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ यो प्रश्नलाई सम्बन्धित निकायले । निर्वाचन आयोग मात्र नभई मूलधारका मिडियाकर्मी, मिडिया कर्पोरेट, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा तल्लिन गैरसरकारी संस्था सम्म । कत्तिको सहज रह्यो त यो मतदान मतदाताहरुकालागि भनेर, अर्को चरणको निर्वाचन अनि आउने संघीय लगायत अन्य संसदीय चुनावहरुमा यी कुराहरुबाट सिक्न जरुरी छ । एक मिटर भन्दा लामो मतपत्रबाट तर्सिएका मतदाताहरु अलमल्ल भएका कारणले मत वदर दर बढेको हो । चुवानको वस केहि दिन अघि भित्तामा पोष्टर टाँस्दैमा मतदाता शिक्षा पूर्ण हुँदैन, स्मरण गरौं हामीमध्ये कतिजनाले निर्वाचन शिक्षा समबन्धि सामाग्री लोकप्रिय नयाँ मेडियाका श्रोतहरूबाट अथवा एसएमएस, या अन्य साम्रगीहरु मोबाईल या ईन्टरनेट मार्फत आयो अथवा सोसियल मेडिया सर्जरी जस्ता विश्व समूदायमा भएका सफल अभ्यासहरूमा प्रयास गर्याैं त ?
कानका फूलीदेखि जुत्तासम्म किन्ने सन्देशहरु फेसबुकाको स्पोन्शर पेजमा आँउदा महत्वपूर्ण निर्वाचन सम्बन्धि जानकारीहरु आएनन ? केही यूट्यूब भिडियोहरु देखिएपनि नेपाली ईन्टरनेट स्पीडले यूट्यूब कत्तिको सहज छ अथवा कत्ति उपयूक्त छ यसको विकल्प निर्वाचन आयोगले सोच्नै नसक्या हो या प्राथमिकतामा न परेको हो ? भविष्यमा विचार पुगोस् नेपालीहरूले डिजिटल मिडियाका नयाँ अविष्कारहरूलार्इ अवमूल्यन नगरीयोस्, हात हातमा क्षणभरमा प्रभावकारी सूचना प्रदान गर्नसकिने यूगमा मतदाता शिक्षामा गल्ति भयो भन्ने केट्केटी कुरो अाउनु बेक्कार छ ।
२) मतपत्रहरु सरल र सहज थिए त ?
यीनै र यस्तै मतपत्र अनि प्रक्रियाले भोलीका चुनावहरु कत्तिको सहज र सरल हुन्छन् त ?
३) मतगणना प्रक्रियालाई कम आँकेकै होईन र ?
मतदान प्रक्रियाको पारदर्शीता अनि केन्द्र भनेकै मतगणना प्रक्रिया हो । यत्तिका धेरै मतपत्र, मतपेटिका अनि लमतन्न मतपत्रहरु गणना गर्न चाहिने जनशक्ति, समय अनि प्रक्रिया कत्तिको स्पष्ट अनि प्रभावकारी छन् त ? आत्मालोचना गरौं है ।
अनि अर्को प्रश्न चाही संसारले विद्यूतीय निर्वाचन गर्न थालेको दशकौ भईसक्दा पनि हामी नेपालीहरु चाँही स्वस्तीक छाप र कागज हातमा लिएर पसिना पुछ्दै लाइनमैं उभिनु पर्ने हो ?
गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर १ मा विद्यूतीय मतदान हुँदा अब क्रमशः अन्य ठाँउमा पनि विद्यूतीय मतदान हुन्छ भन्ने आशा किन तुहाएको निर्वाचन आयोगले ?
४) के बिदेश गएका नेपालीले भोट हाल्न जागीर छाडेरै देश आउन पर्ने हो ?
५० लाख भन्दा धेरै नेपालीहरु विदेशमा रहेको कोरा तथ्याङ्क छ, अनि तिनीहरुको अमूल्य मतलाई छुटाएर गरिएको यो मतदान कत्तिको सान्दर्भिक छ ?
प्रविधीको यूगमा बाल्कोटका कुरा बाल्टीमोरकाले बसन्तपूर भन्दा छिटो थाहापाउँछन् भने एउटा क्लिकमा बैदेशिक रोजगारमा गएको नेपालीले भोट हाल्न नपाउने ?
के यो असंभव छ, निर्वाचन आयोग ?
रेमिट्यान्सका आधारमा चलेको अर्थतन्त्रले बैदेशिक कामदार विनाको आयोजना गरेको यो प्रजातन्त्रको मेला कत्तिको सान्दर्भिक छ ? ्
५) मतदाताको गोप्यता
मतदान प्रक्रियामा क्यामरा लैजान मनाही थियो तर निर्वाचन अधिकृतहरुले केही विशेष ब्यक्तिहरुलाई छुट दिएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएका छन् । त्यसमाथी खुला ठाँउमा कपडा बेरिएका या त्यो पनि नबेरिएका मतपत्र छेउ मा गोप्यता कतिको रह्यो त ? सबैलाई प्रश्न छ ।
अबका दिनमा यी प्रश्नहरुलाई पृष्ठपोषण मानेर निर्वाचन गरियोस् । यो हाम्रो गुनासो होईन, थोरै समय अनि छिपछिपे राजनैतिक अवस्थाका बाबजुद निर्वाचन आयोगले गरेको कार्य अवश्य प्रशंसायोग्य छ ।